VPN Mila Ilaina amin'ny fivezivezena miaraka amin'ny toerana misy ny mpizara Maximum
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » VPN Mila Ilaina amin'ny fivezivezena miaraka amin'ny toerana misy ny mpizara Maximum
Novambra 24, 2020
Tsy afaka mandeha ianao raha tsy manana smartphone, tablette na solosaina finday, tsy maninona raha mpivahiny vaovao na za-draharaha ianao. Raha fintinina, ny teknolojia dia nanamora ny fivezivezena. Na izany aza, ny teknolojia dia nampitombo ny mety hisian'ny loza mety hitranga amin'ny cyber.
Raha ny tena izy dia tsy maintsy mampiasa VPN ianao izay manampy anao hiaro ny fiainanao manokana mandritra ny dianao. Na izany aza, tsy ny VPN rehetra no manome fifangaroana fiarovana sy tsiambaratelo ho an'ireo mpampiasa azy. Noho izany dia tokony hampiasa serivisy VPN manerana ny manodidina ianao toa ny NordVPN izay tsy mandray refy akory raha miaro ny toerana misy an'ireo mpampiasa an-tserasera.
Araka ny Valin'ny fitsapana hafainganam-pandeha NordVPN, azonao atao ny mifandray amin'ireo mpizara tianao ao anatin'ny segondra vitsy rehefa mandeha na aiza na aiza. Vokatr'izany dia azonao atao ny miambina ireo dian-tongotra nomerika amin'ny fotoana fitetezana ny tranonkala amin'ireo fitaovana tianao tsy misy olana.
Ity lahatsoratra ity dia hampahafantatra anao ny VPN tsara indrindra amin'ny fitsangatsanganana izay manolotra fanaparitahana lozisialy lehibe sy fiasa hafa ho an'ireo mpampiasa azy.
Mampiavaka ny NordVPN
NordVPN dia serivisy VPN monina any Panama izay tsy mirakitra ny hetsika ataon'ireo mpampiasa azy an-tserasera. Ankoatr'izany, ny serivisy dia mifanentana amin'ireo sehatra lehibe rehetra toa ny Windows, Mac, Android, iOS, ary ireo mpizaha tranonkala toa an'i Chrome sy Firefox.
Ity ny lisitra misy endri-javatra malaza sasany azonao ampiasaina amin'ny fitaovana maro:
Tsy politika politika
Hamono ny famantaranandro
Midira amin'ny WhatsApp sy serivisy hafa raha voasakana
Raha miresaka momba ny fisian'ny NordVPN iraisam-pirenena isika dia ho gaga ianao mahafantatra fa misy ny serivisy any amin'ny firenena 55+ amin'ny alàlan'ny mpizara 5500+ manerantany. Raha mikasa ny handany ny fialan-tsasatra fanaonao isan-taona amin'ny olon-tianao ianao dia tsy hiatrika sakana rehefa mifandray amin'ny mpizara tianao.
Ny mampiavaka an'i NordVPN avy amin'ireo mpamatsy hafa dia ny fisorohana ny fisorohana ny zotram-pahefana. Ny serivisy dia tsy mitahiry ny angon-drakitra ho an'ny mpamandrika, manao azy a serivisy VPN azo itokisana sy azo itokisana ho an'ny mpampiasa indrindra ny mpandeha. Midika izany fa tsy mitahiry log amin'ny endrika adiresy IP sy ny mombamomba anao manokana ny mpamatsy.
Kill switch dia endri-javatra mahavariana iray hafa izay mbola miambina ny hetsika an-tserasera na dia tsy mandeha ny serivisy VPN na inona na inona antony. Raha mizaha Internet ianao ary mivezivezy amin'ny tranokalan'ny firenenao amin'ny maha-mpizahatany anao ary tampoka tsy nahomby ny fifandraisanao VPN dia ho tapaka koa ny fifandraisanao amin'ny Internet mba hiarovana ireo dian-tongotra nomerika amin'ny Internet.
Raha tianao ny misintona riaka dia azo antoka fa ho mora ampiasaina ity endri-javatra ity. Izy io dia satria hiarovana ny hetsika ataonao amin'ny ISP sy ireo mpihetsiketsika fanaraha-maso hafa rehefa te hijery ny seho fahitalavitra eo an-toerana ankafizinao ianao amin'ny alàlan'ny fampidinana ny rakitra torrent any ivelany.
NordVPN dia mamela ny mpampiasa azy hiditra amin'ny serivisy voasakana any amin'ny faritra. Raha te-hanafoana ny kaonty Netflix na Disney Plus ianao rehefa mandeha dia mila mifandray amin'i NordVPN aloha ianao.
Noho izany dia azonao atao ny miditra amin'ny kaontinao Netflix na Disney Plus ary mijery ireo fandaharana amin'ny fahitalavitra tianao, sarimihetsika, fanadihadiana, sns tsy misy olana. Soa ihany fa ny serivisy ihany koa mifanaraka amin'ny Amazon Fire TV Stick izay ahafahanao manatsara ny fiainanao amin'ny fivelarana amin'ny haavony vaovao.
Mampalahelo fa tsy afaka miditra amin'ny WhatsApp, Skype, sy serivisy hafa ianao arakaraka ny filanao any amin'ny firenena isan-karazany toa an'i Chine, UAE, Saudi Arabia, sy ny hafa. Noho izany dia mila mifandray amin'i NordVPN ianao alohan'ny hidirana amin'ny WhatsApp, Skype, ary serivisy hafa avy any ivelany.
Raha vantany vao tonga amin'ny toerana tadiavinao ianao dia ampodino ny fampiharana VPN ary ampifandraiso amin'ireo mpizara amin'ny firenena iasan'ny WhatsApp. Ity no ahafahanao miditra amin'ny WhatsApp sy serivisy VoIP hafa safidinao soa aman-tsara.
Fa maninona no mila VPN ianao rehefa mandeha?
Ny mpampiasa dia mila mampiasa Internet amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ireo tamba-jotra tsy fantatra na tsy mahazatra hita any amin'ny hotely, seranam-piaramanidina, trano fisakafoanana, fivarotana kafe, sns. Ho fanampin'izany, ny hackers sy ny cybercriminalitera hafa dia afaka miditra amin'ireo tambajotram-bahoaka ireo ary mampiasa diso ny mombamomba ny olona ary manatanteraka ny tanjony tsy ara-dalàna.
Eto no ilanao VPN hiarovana ny mombamomba anao amin'ny Internet amin'ny maha mpitsangatsangana anao amin'ny fandrahonana isan-karazany toy ny fanapahana hack, fidirana an-tsokosoko, fangalarana data, sns. fifamoivoizana an-tranonkala iray manontolo. Vokatr'izany, afaka mijery Internet izy ireo nefa tsy manimba ny fiainany manokana.
Raha fintinina, tsy maintsy arovanao ny fizahanao tranokala sy ireo asa an-tserasera hafa amin'ny alàlan'ny VPN rehefa mandeha any ivelany. Amin'ity fomba ity, azonao atao ny mitazona elanelam-panjakana malaza ratsy toa ny hackers, scammers, ary goons cyber hafa mety.
Raha dinihina ny voka-dratsy ateraky ny loza mety hitranga amin'ny cyber dia tokony hampiasa NordVPN ianao izay ahafahanao mijanona ho azo antoka rehefa mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi ampahibemaso. Amin'izany dia azonao atao ny manatanteraka ireo zavatra tianao tadiavina toy ny fandefasana video, fiantsenana an-tserasera sy ny hafa amin'ny fomba tsy fantatra anarana na avy aiza na aiza.
Kintana eoropeanina chess mitory an'i Netflix amin'ny fiantsoana azy ...
Filoham-pirenena Skål Asia: mifanena amin'ny kandidà Andrew J. Wood